10 barnaamij si aad uga faa'iidaysato shaashadda weyn ee kiniinkaaga | Androidsis
10 barnaamij si aad uga faa'iidaysato shaashadda ugu weyn kiniinkaaga
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Kiniiniyada Android, Tababarada
Markaan joogno 2016, waxaa loo malaynayaa in qayb weyn oo ka mid ah barnaamijyadu hore u lahaayeen Noociisa ayaa si gaar ah loogu hagaajiyay kiniiniyada, shaygu saas ma aha, mararka qaarkoodna ma sahlana in la helo mid mas'uul ka ah ka faa'iidaysiga ballaca iyo dhererka kiniin oo si fudud u dhaafi kara 7 inji. Markii aan helnay ikhtiyaarka waqti aan fogeyn inaan helno barnaamijyo si gaar ah loogu talagalay kiniiniyada, hadda Dukaanka Google Play wuxuu noqday meel aan waqti wanaagsan ku qaadan karno helitaan wax aad u mudan.
Marka waxaan kugula talineynaa 10 barnaamij oo aad adigu leedahay Aad bay u iman karaan si ay uga faa'iidaystaan shaashaddaas weyn ee kiniinka ah oo xitaa kuu oggolaan doonta inaad ka faa'iidaysato hawlo badan oo leh codsi marmar ah oo dhowaan loo cusboonaysiiyay ujeeddadan. 10 barnaamijyo khaas ah oo loogu talagalay kiniinnada oo qaarkiin ogaan doonaan halka kuwa kale ay kaa dhigi doonaan inaad ogaato codsiyo cusub oo loogu talagalay aaladdaas weyn.
1 Xafiiska Suite Pro
4 Desktop fog
10 Suuqa Tablified
Xafiiska Suite Pro
Barnaamijkan marka uu ku jiro qaabka muuqaalka waxay aad ugu egtahay Microsoft Office qaabkeeda desktop -ka. Waxaad haysataa tijaabo 7 maalmood ah si ay kaaga dhaadhiciso in nooca Pro ay tahay in la iibsado. Ma ahan wax fudud in la helo app adeegsata baaxadda shaashadda oo dhan, sidaa darteed Office Suite Pro aad ayaa loogu taliyay tan aad u faahfaahsan.
OfficeSuite Pro + PDF (Maxkamad)
Ilaa dhowr maalmood ka hor wax badan kama dhihi karno wanaajinta Skype ee kiniiniyada, laakiin waa la cusbooneysiiyay wuuna keenay isla interface -ka iPad -ka. Taas macnaheedu waa inaad yeelan karto wicitaan firfircoon ama wicitaan fiidyow ah markaad ka jawaabeyso farriimaha sheekaysiga ee isla shaashadda. Guul weyn si aad u keento waayo -aragnimada Skype ugu fiican kiniin.
Ku haysashada Adobe Lightroom on Android waa raaxo iyo haddii aad isticmaali karto dhammaan shaashadda kiniinigaaga, si ka sii fiican. Inkastoo tan xaddiday arrin hardware, waxay leedahay sifo aad muhiim u ah in masaafada u jirta barnaamijyada kale ee naqshadeynta. Waa app -ka ugu fiican xilligan ee tafatirka sawirrada iyo in badan oo ka imanaya cidda uu ka yimid.
Adobe Lightroom: Tafatir Sawirrada
Hayso app in si toos ah kuugu xira miiska laga bilaabo kombiyuutarkaaga kiniin waa muhiim. Si aynaan wax u khalkhal gelin, waxaan ku rakibnay Google Remote Desktop oo ilbidhiqsiyo gudahood waxaan ku yeelan doonnaa desktop -ka kombiyuutarkeena si loo xakameeyo shaashadda taabashada. Shaqo weyn oo ka timid Google oo loogu talagalay app u shaqeeya sida soo jiidashada. Xusuusnow inay tahay inaad ku rakibto fiilada Chrome -ka desktop -ka si aad awood ugu yeelatid inaad adeegsato.
Markii aysan jirin barnaamijyo badan oo ku yaal Android oo lahaa xarrago muuqaal leh, Flipboard -ka ayaa u yimid sidii ilayska cadceedda taasi waxay kaa indho tirtay iftiin badan oo ay soo saartay. Flipboard -ka ayaa wali ku jira Android waana mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee adeegsada is -dhexgal loogu talagalay kiniinnada. Lagama reebi karin liiskan 10 barnaamij oo khaas ah oo loogu talagalay kiniiniyada.
CloudMagic wuxuu sameeyaa wax weyn isku -dhafka u dhexeeya dhinaca muuqaalka ee interface -ka iyo sifooyinka ay u leedahay maareynta dhowr xisaabaad oo iimayl, ku xiridda faylasha adeegyada kaydinta daruuraha ee kala duwan iyo isku -darka aaladaha internetka sida Instapaper iyo Evernote. Barnaamij gaar ah oo loogu talagalay kiniinnada sida aad arki karto.
Newton Mail - Email & Kalandarka
Barnaamijka ku habboon qaadashada qoraalada iyo in ay leedahay tayo aad u weyn gabi ahaanba iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinka kala duwan ee ay leedahay. Waa mid kale oo shaqo weyn ka qabta wanaajinta shaashadda si ay warqaddu u furnaato 3/4 qaybood, halka inta kale aan ku dhex socon karno buugaagta wax lagu qoro iyo qalabka loo adeegsado tafatirka iyada oo aan dhibaato weyn la qabin.
Evernote - Qoraallada Abaabulaha
Developer: Shirkadda Evernote
La mindida ciidanka swiss video playback iyo maqalku wuxuu shaqo weyn ka qabtaa meesha la hagaajiyay ee kiniiniga si uu u awoodo inuu yeesho xitaa sawirrada thumbnail -ka sidaasna ku maareeyo dhammaan faylasha fiidiyaha ee aan ku hayno xusuusta gudaha ee aaladda. Wax walba waa laga yaqaanaa VLC sidoo kale waxaan ognahay inay aad ugu fiican tahay kiniin.
Wakhtigan markaan qorshaynayno fasaxyada, La -taliyaha Safarka waa app si fiican uga shaqeeya kiniin. Waad awoodaa abuur waddooyin, duulimaadyada buugga ama ka diyaarso safarkaaga raaxada aaladdan.
Tripadvisor: qorshayaasha iyo boos celinta
App daryeela barnaamijyada shaandhaynta ee Dukaanka Google Play si aan kuugu keeno kaniiniyada ugu fiican. Waa app lagama maarmaan u ah helitaanka noocyada kale ee barnaamijyada. Waxaa lagu kala saaraa qaybo waxayna leedahay liis lagu taliyay oo codsiyo ah oo si waxtar leh u imaan kara.
Abka kama helin bakhaarka. 🙁
Tag dukaanka Raadinta bogga Google
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 10 barnaamij si aad uga faa'iidaysato shaashadda ugu weyn kiniinkaaga
Samsung ayaa bilaabi doonta taleefan leh shaashad jilicsan sanadka 2017
Taageerada Cortana ee Microsoft Band 2 ayaa hadda sidoo kale laga heli karaa Android